Wararka ciyaaraha - BBC News Somali
Lampard ayaa shaaciyay in uu isaga tagayo kooxda New York City.
Image caption Lambard 21 kulan ayuu ku dhaliyey 15 gool
Ciyaaryahankii khadka dhexe uga ciyaari jiray qaranka England & kooxda Chelsea Frank Lampard ayaa sheegay in uu isaga tagayo kooxda horyaalka MLS-ka Mareykanka ka ciyaarta ee New York City.
38 jirkan oo heshiiska uu kooxda kula joogo uu dhacayo dhamaadka sanadkan ayaa ku qoray barta Instagram ee uu ku leeyahay Internet-ka wuxuu ku shaaciyey in waqtigiisii kooxda uu hadda soo dhamaaday.Waxaa lagu wadaa in uu faahfaahiyo talaabada xigta ee mustaqbalkiisa.
Lampard ayaa dhaliyey 15 gool 31 kulan oo uu u saftay kooxda New York, 2 sano oo uu la joogay kooxdaasi inkastoo mar uu amaah ugu yimid kooxda Manchester City.
New York City waxaa lagu garaacay 7-0 laba kulan oo ay la ciyaartay kooxda Toronto FC.
Jordan Henderson ayaa Wayne Rooney kala wareegaya kabtanka England ciyaarta Spain
Image caption Jordan Henderson
Xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxdda Liverpool Jordan Henderson ayaa la sheegay in uu xiran doonno calaamadda Kabtanka xulka England ciyaarta beri ku dhexmaraysa garoonka Wembley xulalka England iyo Spain.
Ciyaartan oo ah mid saaxiibtinimo waxaa Handerson uu badali doonnaa kabtanka qaranka iyo kooxda Manchester United Wayne Rooney oo dhaawac ah.
Rooney, oo kabtan ka ahaa ciyaartii ka midka ahayd isreebreebka koobka aduunka ee England ay ku garaacday 3-0 xulka Scotland. Laakiin maanta ayuu ka maqnaa tababarkii kooxda isagoo la sheegay in uu qabo dhaawac yar.
"Kuma bilaabi doonno Wayne ciyaartan [Enagland vs Spain]. Waxaan go'aansan doonnaa dhabaha aynnu qaadi doonno" ayuu yiri tababaraha kumeelgaarka ah ee England Garath Southgate.
Henderson oo 26 sano jir ah wuxuu kabtan ka ahaa xulka England ciyaartii 0-0 ay la galeen xulka Slovina bishii hore.
Antoine Griezmann oo ka maqnaan doona kulanka ood-wadaagga ah ee Madrid
Weeraryahanka kooxda Atletico Madrid Atletico Madrid Antoine Griezmann ayaa seegi doona ciyaarta ood-wadaagga ah ee kooxaha Real Madrid & Atletico Madrid ee Sabtida ay yeelanayaan, laakiin waxaa la sheegay inaannu qabin dhaawac jab cagta oo ka soo gaaray ciyaartii 2-1 ay Faransiisku uga badiyeen xulka qaranka Sweden Jimcadii.
Griezmann wuxuu dhaawac ka qabaa lugta bidix laakiin kooxda caafimaad Atletico "inaannu qabin wax jab laf ah" ka dib raajo la saaray.
25 jirkan haatan waa gooldhaliyaha koobka La Liga -ha Spain isagoo leh 6 gool. Atletico waxay ku martigalin doontaa garoonkeeda Vicente Calderon kooxda Real Madrid ee hogaanka haysa, iyadoo ay u dhaxayso lix dhibcood ka dib 11 kulan oo la ciyaaray.
Griezmann oo ku laabtay Madrid, taasi macnaheeddu waa in uu seegi doono ciyaarta saaxiibtinimmo ee Faransiisku la yeelanayo xulka Ivory Coast Salaasad, iyadoo maanta ay u bilaabatay daaweyn.
Edin Dzeko oo si la yaab leh loo siiyey kaarka cas
Kubad dhaliyaha qaranka Bosnia Edin Dzeko ayaa karaka cas la siiyey ciyaar xamaasad badnayd oo ku aadanayd isreebreebka koobka aduunka oo ay la yeesheen Gariiga.
Dzeko ayaa lagu siiyey karaka cask a dib markii uu surweelka gaaban ka jeediyey ciyaaryahanka Kyriakos Papadopoulos ee xulka Gariiga ka tirsan.
Dzeko oo 30 jir ah una ciyaara kooxda Talyaaniga ka dhisan ee Roma ayaa dhulka ku dhacay ka dib markii ay kubad isku qabsadeen Kyriakos Papadopoulos daqiiqaddii 79-aad iyadoo kooxdiisu 1-0 ciyaarta ku hogaaminayso, isagoo dhulka yaal ayuu hoos u jiiday surweelka gaaban ama buumada Kyriakos Papadopoulos taasi oo keentay in la siiyo kaarkii labaad ee hurdiga sidaasina uu ku qaato kaarka cas.
Papadopoulos ayaa isagana isla markiiba la siiyey kaarka cas laakiin xulkiisu waxay ciyaarta barbardhac ka dhigeen daqiiqadii 95-aad.